Soonaha cusub ee Warshadaha Gaarka loo leeyahay si loo yareeyo Khasaaraha Akoonka ee hadda jira 330 Milyan oo Doollar - RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaSoonayaasha Warshadaha Gaarka ah ee Cusub si loo Yareeyo 330 Milyan oo Doolar Xisaabtan Xilligaan ah
23 / 10 / 2019 16 Bursa, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
aag cusub oo warshadeed oo gaar loo leeyahay si loo naaquso hoos u dhaca xisaabinta hadda $ milyan
Wasiirka Warshadaha iyo Teknolojiyadda Mustafa Varank, Bursa, Asil Celik iyo Warshadda Bacriminta Gemlik waxaa laga dhisi doonaa aagagga warshadaha ee gaarka loo leeyahay, "labadan gobol waxay ka shaqeeyaan awood buuxda, khasaaraha hadda jira wuxuu noqon doonaa dhimis $ 330 milyan oo doollar sannad walba." Ayuu yidhi.
Wasiirka Varank, Rugta Ganacsiga iyo Wershadaha BursO (BTSO) khudbadiisa khudbadii uu ka jeediyay shirkii golaha ee bishii Oktoobar, magaaladu waxay sameysay furitaanno kala duwan iyo booqashooyin, TÜBİTAK'ın Bursa Tijaabada iyo Sheybaarka baarista ayaa soo booqday, warshadda duritaanka cadaadiska sare ee Al-Oumiya Renault, ayaa sheegay in soosaarka tijaabada.
Varank wuxuu caddeeyey inuu ku faraxsan yahay in warshadda, oo ka bilaaban doonta wax soo saar ballaaran oo Oyak Renault, la keenay Bursa oo wuxuu yidhi, alüminyum Iyadoo warshaddan, aluminium alwaax laga soo saaray ayaa la soo saari doonaa markii ugu horreysay ee waddankeenna ah. Matoorada isku-dhafan waxaa loo dhoofin doonaa Shiinaha, Spain iyo Boqortooyada Ingiriiska. Waxa ugu wanaagsan ayaa ah in badeecado badan oo loo adeegsado wax soo saarka ay ka imaan doonaan ganacsatada maxalliga ah. Sidaa darteed, waxaan ka hadlaynaa qiimo sare oo maalgashi tusaale lagudareynayo oo si toos ah ugu adeega himilooyinkeena maxalliga ah, dhoofinta iyo shaqooyinka u qalma.
Wasiir Varank wuxuu cadeeyay inay booqdeen warshado kala duwan oo ka shaqeeya waaxda mishiinada ayna sii wadaan sida soo socota:
Xaqiiqdi, xooggeena maanta ina soo food saaraya ayaa si cad u muujinaya sida Bursa u dhaqdhaqaaq iyo wax soo saar leh. Cabbirka dhoofinta ee 9 bilyan doolar oo aad ku muujisay 11 ee sanadka waa muujinta kale ee wax soo saarkaaga. Markaan fiirino qodobada hoose, waxaan aragnaa in Bursa ay leedahay kaabayaal warshadeed oo awood u leh inay dhoofiyaan ku dhawaad ​​qeyb kasta. Dabcan, taageerada aan siino ayaa si weyn uga qayb qaadatay horumarinta kaabayaashaas. Ilaa maanta, waxaan ku dhiirigelinay 40 bilyan ginni maalgashi go'an oo ku yaal Bursa waxaanan siinay shaqo ku dhawaad ​​hal kun oo muwaadiniin ah 50. 27 kun oo SMEs waxay ka faa'iideystaan ​​KOSGEB meelaha ay ka mid yihiin ganacsiga, R&D, wax soo saarka iyo maalgelinta.
100 WAXAAN KU SAMEEYNAA FURSAD FURAN SI AAD U HESHIIDDO MUWAADINIINTAADA KASTA
Isaga oo tixraacaya in KOSGEB ay bilaabeen barnaamij amaah cusub oo gaaraya illaa 50 kun oo rodol, Varank wuxuu sheegay in KOSGEB ay dabooli doonto kharashka maalgelinta ee 50-deynta ee amaahda ay heshay ilaa kun ginni.
Wasiirka Varank, 2002 9 wuxuu abaabulay aag warshadeed oo kuyaala Bursa horaantii X -17, halka 8 XNUMX sanadkastana loo keeno magaalada adoo soo jiitay dareenka aaga warshadaha cusub ee abaabushay, ayaa yiri:
Markaa, waxaan u abuurnay shaqooyin cusub in kabadan kun muwaadiniin ah. Mar labaad sannadkan waxaan ku dhawaaqnay laba aag oo warshado gaar loo leeyahay. Markii labadan gobol ay ku shaqeeyaan awood buuxda, xisaabtankeena hadda jira wuxuu hoos ugu dhici doonaa 100 milyan oo doolar sannad walba. Muuqaal kale oo caan ah oo ka mid ah Bursa waa saadaalintiisa cusub. Waxaa jira xarun 330 R & D ah oo ku taal gobolkayaga, kaas oo keena Bursa darajada 128 ee Istanbul ka dib Istanbul. Sida xaqiiqda ah, maahan dhacdo in saamiga alaabada tikniyoolajiyadda dhexdhexaadka ah iyo tan sare ee dhoofinta Bursa ay ka sarreyso 2.
Sidaad ogtahay, waxaan soo maray marxalad isbadal farsamo oo deg deg ah. Warshadeena ayaa u baahan in loo diyaariyo tan. Ujeedadaas awgeed, ka dib Ankara, waxaan furay warshadheedii labaad ee moodda Bursa bishii Maarso. Annaga oo ah wasaarad ahaan, waxaan ku deeqnay hal milyan oo ginni halkan. Warshadahayagu waxay si joogto ah u xaadiraan codsiyada jilista iyo tababbarka dhijitaalka ah. Adigoo adeegsanaya robots-ka khadka soosaarka, is-dhexgalka dhijitaalka ah ee u dhexeeya mashiinada iyo internetka ee codsiyada walxaha, waxaan u jeednaa inaan keenno warshadda moodelka qaab dhismeedka bixiya tababar dheeraad ah iyo la talin.
Wasiir Varank wuxuu cadeeyay inay go’aamiyeen tillaabooyinka la qaadayo iyadoo la raacayo Istaraatiijiyadda Wershadaha iyo Teknolojiyada ee 2023 wuxuuna yidhi, “Waxaan u diyaarinay istiraatiijiyaddan ruugcadda Dhaqdhaqaaqa Tiknolojiyadda Qaranka waxaanan dejinay bartilmaameedyo la taaban karo oo hammi ah oo ku aaddan jidka loo maro xarun-u-ahaanta Jamhuuriyadda. 5 waa udub dhexaadka siyaasadeena. Midka hore waa tikniyoolajiyad sare iyo hal-abuurnimo. Hadafkayagu halkaan waa inaan ka dhigno waddankeenna tartan tartan ku ah teknoolojiyadda muhiimka ah iyo inaan noqdo xiddig muhiim u ah horyaalnimada adduunka. Waxaan qaadi doonnaa tillaabooyin la taaban karo oo loogu talagalay is-beddelka dijitaalka ah ee warshadaha iyo warshadaha ku-saleysan teknolojiyadda. Iyadoo la raacayo siyaasadaha aan ku hirgalin doonno ganacsiga meheraddiisa, waxaan kordhin doonaa tirada ganacsatada guud ahaan nidaamka oo dhan min fikrad ilaa wax soo saar iyo xoojinta deegaanka. ”
TRUST TURKEY DHAQAALAHA
Isagoo ogaanaya in taageerada dhabta ah iyo iskaashiga ay muhiim u tahay iyaga, Varank wuxuu yiri:
Waxaan rabnaa inaan kugu dhiirigelinno inaad maal gasho oo aad si xoog leh u soo saarto. Waxaan u diyaarinnay Barnaamijka Wax-ka-qabashada warshadaha ee teknolojiyadda ujeeddadan. Hadafkayagu halkan waa inaan soo saarno alaabo tayo sare leh oo leh karti iyo karti gudaha ah. Ujeedadaas awgeed, waxaan aqoonsanay oo aan taageerney alaabada mudnaanta leh ee qaybaha diiradda lagu saaray. Wajahadan dhexdeeda, waxaan ku maareyn doonnaa taageerooyinka qaab isku mid ah annagoo ku dhiirigelinay iibsadayaasha iyo soosaarayaasha isku waqti. Dhiirrigelinteena istiraatiijiyadeed ama mashruuc-ku-saleysan ee maalgashiga waxay noqon doontaa adeegga ganacsatada. Waxaan ku bilownay waaxda mashiinka duuliye ahaan. Codsiyada ayaa soconaya illaa Noofembar 22. Waxaan aaminsanahay kuna kalsoonahay barnaamijkan si aad ah. Kaalay oo ka mid noqo barnaamijkan, sameyso dalabkaaga. Aynu waddo u qaadno dariiqa madax-bannaanida dhaqaalaha wadajir ahaan.
Eeg, Hawlgalkii Nabadda ee Hawlgalkii Nabadda ayaa mar labaad shaaca ka qaaday run aad u cad. Wadada aan ka soo marnay warshadaha difaaca waxay noo keentay guul. Hadda waa guusha qaybaha kale ee warshadaha. dhaqaalaha Turkey iyo kalsooni hab u xoog badan oo aad ka iman kara. Kharashaadka maalgelinta iyo sicir-bararka ayaa hoos u dhacay, waxaan dejinay heerka sarrifka. Ururada caalamiga ah ayaa mid mid u eegaya. Waxaan rajeynayaa in dhaqaalaheena ay maalinba maalinta ka dambeysa sii xoogaysan doonaan.
KU SAABSAN KU SAABSAN POSITIVE AGENDA
Isagoo tilmaamay in Bursa ay tahay mid ka mid ah cinwaannada saxda ah ee waxsoosaarka iyada oo la adeegsanayo ilaha aadanaha iyo fursadaha loojistikada, Varank ayaa yiri, “Waxaan aaminsanahay in Howlgalka Gu'ga Nabadda uu wax weyn ka tari doono amniga iyo xasilloonida joogtada ah ee gobolkeenna. Tallaabadan waxaa abuuri doonaa oo keliya meel ammaan ah our soohdinta ma aha dhaqaalaha Turkiga. Dowladi ahaan, waxaan si buuxda diirada u saarnay ajandaha wanaagsan. Turkey si ay u qaadaan tallaabooyin ay u ballaadhiyo quruunteenna, salaysan mudnaanta si aan u guuro si loo hagaajiyo daryeelka. "Ayuu yiri.
Khudbadiisa ka dib, Wasiir Varank, BTSO waxaa dhisi doona ... BTSO 15 July Martyrs. Dr. Moodeelka oclhan Varank Vocational Education Complex ayaa loo soo bandhigay hadiyad.
Guddoomiyaha Bursa Yakup Canbolat, Duqa Magaalada Caasimadaha Caalin Alinur Aktaş iyo gudoomiyaha BTSO İbrahim Burkay ayaa ka qeybgalay barnaamijka.
Taageerada Wareegga Gaadiidka ee gudaha
Tareenka Xawaaraha Sare wuxuu sidoo kale noqon doonaa xalka dhibaatada hadda jirta
Mashruuca URAYSIM wuxuu yarayn doonaa daroogada
Ogeysiiska Udiridda: Loo Adeegsiga Nidaamyada Calaamadaha Udhaxeeya Kayseri iyo Yerköy öy
Ku dhawaaqida qandaraaska: Waxaa loo istcimaalaa nidaamyada calaamadaha ee udhaxeeya Kayseri Yerköy…
Sawir Wedding of Marmaray 330
Khadadka cusub ee isgaadhsiinta ee Istanbul ayaa u duuli doona aagaggaas
Maanta oo Taariikh ah: 16 Luulyo 1920 Dowladii Golaha Sare ee Qaranka kalan
500 Million TL Ganacsiga Ganacsi wuxuu ka dhacaa Shirarka Wanaagsan ee Ganacsiga
Xarunta dhismaha 50 8 oo ka badan hal milyan oo doolar
Aagagga Warshadaha Gaarka ah ee Khaladka Koontada
Shaybaarka Bursa iyo Baadhitaanka Falanqaynta
Istaraatiijiyadda Warshadaha iyo Teknolojiyada
Aagagga Warshadaha Gaarka ah ee Cusub ee Khaaska ah
Maalmaha Dhiirrigelinta Dhirta Dhirta ee Yurub